Diiwaanka Maansada Timacadde- Maansayahankii Aan muraadsiga aqoon!W/Q Abwaan Yuusuf-shaacir | Allsomaliland
Diiwaanka Maansada Timacadde- Maansayahankii Aan muraadsiga aqoon!W/Q Abwaan Yuusuf-shaacir
July 6, 2017 - Written by Admin
Qastijeeray wadayeelatoo qawlka kuheshiiso
Qabyoweeye Soomaaliyeey qiiradaadaniye
14kii June 2017 shirkadda daabacaadda ee Sagaljet waxay ii gudeeqday nuqul ka mid ah Diiwaanka Maansada Timacadde ee uu qoray Boobe Yuusuf Ducaale oo dhawaan soo baxay. Sidaan filayo, dhawaanahana la soo bandhigi doonaa.
Guud ahaan waa buug soo-jiidasho leh marka loo eego qaabka uu u
diryaarsanyahay,waxaanay markiiba ishaadu ku dhacaysaa sawirka Alle ha u naxariistee Marxuum Timacadde oo jaldiga sare ku yaalla. Waa daabacaaddii saddexaad oo sida muuqata shin-dhalad, tuur iyo tarbiicaba laga hufay. Intii aan buug suugaaneed arkayay waa kii ugu maansooyin badnaa,waxaana ku daabacan 150 maanso.
Cabdillaahi Suldaan oo ku caanbaxay Timacadde wuxuu safka hore kaga jiray halyeeyadii tirada iyo tayadaba lahaa ee naftooda u sadqeeyay halgankii gobanimo-doonkaa ahaa soona hooyay calanka maanta Soomaalidu ku faanto. Hibooyin is barkan ayaa Alle ku mannaystay Timacacde.Wuxuu ahaa maansoyahan Alle u sakhiray curinta ama falkinta tixeed sida uu isaguba ku sheegay dhawr gabay oo ay ka midyihiin“Masoo ururiyo ee keyga waan igadh salaaxaaye” iyo “Meer meerimayo oo tixaan meel dhaw ku ogaaye.”
Waxaa kale oo cajiib ahayd haybaddii iyo luuqdii uu ku hantiyay dhegeha dadwaynaha taasoo aragtidiisa sugaaneed u gudbisay si sahlan marnaba kama uu leexan mabaadii’dii uu u taagnaa ee ay ka mid ahaayeen waddaniyadda kuwaas oo ka dhex muuqda maansooyinkiisa sida uu ku sheegay tixo dhawr ah oo uu si guud dadweynaha ugu lahadlayey. Isaga oo ka digayay gacmo hoorsiga waa kii lahaa:
Cabdillaahi Suldaan wuxuu ka maansoon jiray qaybaha kala duwan ee nolosha sida dhaqanka,aqoonta waddaniyadda, wadajirka, midnimada bulshada iyo wacyigalinta umadeed. Dhinaca kale wuxuu si farshaxan ah u tilmaamijiray diinta Islaamka isagoo aan baryada Alle aan ka ciijisi jirin. Bal eeg geeraarkan la-yaabka leh ee xamdi-naqa ah:
Ilaahi iNebi Ciise
Cawar see fugu dhiibayaw
Adaacaalimul- qayb ah.
MaansadaTimacadde laba qodob ayaa ugu mudnaa. Midi waxay ahayd xornimo-doonkii aan xuduudda lahayn, ta kalena waxay ahayd digniintiiuu ka bixin jiray xumaanta iyo dib-u-dhaca qabyaaladdu leedahay. Tusaale kooban waxaa inoogu filan xilli uu socday dagaal sokeeye oo u dhexeeyey beeshiisa iyo beel kale ayaa lagu dirqiyey in uu maanso tiriyo oo uu u jawaabo gabyaa ka soo jeeday beesha kale. Hase yeeshee jawaabtii uu bixiyey waxay noqotay mid ka duwan tii la filayey. Indheer-garanadnimadiisu waxay keentay dhinacyadii is ka horjeeda in uu ka dhigo ardaa kali ah. Waxaanu tiriyey tixdan hal qabsiga iyo maah maahda noqot ay
Goortay iswada tooxa taa daad u soogalay’e
Dugsi male qabyaaladi waxay dumi somooyeene
Mar kale isaga oo muujinaya nacaybka uu qabyaaladda u hayay wuxuu yidhi:
Nin qabyaalad heensaynayaa guul ma haybsado
Abwaanku waxaa kale oo uu siwayn ugu suntanyahay halgan kii xornimo-doon kaa haa. Suugaantiisu waxaya hayd guubaabo, kincin iyo caroog ka nixiya gumaysigii dalka haystay,taasaana sabab u ah in qofkasta oo bulshada ka mid ah in ay isugu xidhanto calansaarkii 1960-kii iyo geeraarkii Timacadde ee uu lahaa:
Kaanasiib kana saar
Dawladihii kala dabeeyey ee rayidka ahaa oo taariikhda ku galay eex, musuq iyo qaraabo-kiil Timacadde iyo qayrkiiba suluug weyn ayay ka muujiyeen. Waana waxyaabihii soo dadajiyay inqilaabkii ay ciidamadu kula wareegeen taladii dalka,walow aanu nidaamkii milatiriga ahaa wax badan la shaqayn marka la gareebo dhawr tixood oo dhiirigelin ah oo uu bilawgii Kacaanka curiyey kuwaas oo uu kudoonayey in wax laga qabto musuqa,eexda iyo wixii la hal maala . Waa kiilahaa:
Dhunkaal shilinku jeer uu noqdoo dhuunta mari waayo
Dhaabbadaa aan soojilay haddii laga dhabayn waayo
Cabdilaahi Suldaan naxariistii janno Alle hasiiyee 1973kii ayuu ku xijaabtay Kalabaydh oo galbeed kaga toosan magaalada Gabiley. GeeridaTimacadde oo naxdinteeda lahayd waxay ka hadlisay hal-abuurkii magaca ku lahaa suugaanta Soomaalida. Aan soo qaadano tixdii Damaq iyo Xusuus ee uu Gaarriye ku sifeeyay Cabdulaahi Suldaan.
Dan kuxeeban jirine
Xeelihadal ku caan baxay
Mabda’aan la xadijirin
Faraskii xiddays naa
Xakamihii ayaa sudhi
Abwaan Hadraawi qoraal uu ku daray Diiwaanka MaansooyinkiiTimacade isna wuxuu ku yidhi:
Cabdillaahi Suldaan shaqsiyaddiisu waxay kugu dajirtaa gabayadiisa iyo erayadiisa. Gabayadiisa iyo erayadiisuna waxay ku dhex jiraan codkiisa. Codka CabdillaahiSuldaan cid waliba way ku qasbanayd in ay u dhegtaagto. Cabdullaahi Suldaan shaqsiyaddaas ayuu ahaa xayga ah ee aan intaxabaal lagu riday laga dareerin. Ilaa maanta Cabdillaahi Suldaan wuu dhexjoogaa dadka aqal walbana wuu yaallaa. Dareenkasta oo qof leeyahayba wuu weheliyaa,dhacdo kasta oo waddaniya Cabdilaahi Suldaan waa ka kaw. Mawqifkaan Cabdillaahi Suldaan ka taagnahay waa mid ixtiraamleh, xaqdhawr leh, mudnaan leh, kalgacal leh. Waa taa ta uu xaggayga ku leeyahay Cabdilaahi Suldaan. Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo,innagana gabayadiisu meel ha inoo buuxiyeen.
Wixii ay hal-abuurku ka yidhaahdeenTimacadde iyo tixdiisa aan ku lingaxo geeraarkii ducada ahaaa ee abwaan Xuseen Aw Faarax.
In uunaar ka xoroobo
Jannaduu ku negaado
Ugu dambayn, Boobe Yuusuf Ducaale oo muddo soddon sanadood ka badan ku raad joogay sooyaalkaTimacadde wuxuu innaga furtay xil iyo waajibaad ummadeed. Waxaan odhan lahaa, anigoo soo amaahanaya tixdii Cali Sugulle uu Muuse Galaal ugu boroordiiqay“Waad gudatay Boobow xilkii kula gudbaanaaye. Xigasho Xushmad leh Diiwaanka Maansadii Timacade.